आमाको कि’रिया बाट उत्रीने खर्च पनि छैन कसरी उम्कने होला ? हे-भग्वन – News Nepali Dainik
आमाको कि’रिया बाट उत्रीने खर्च पनि छैन कसरी उम्कने होला ? हे-भग्वन
प्रकाशित मिति: आइतबार, माघ २५, २०७७ समय: १०:४४:३८
कुनै पनि मानिस गरिब हुँदैन । गरिबी त एउटा सोच मात्र हो। जसले आफूलाई गरिब सोच्छ उसले आफूलाई पक्कै पनि आफूभन्दा समृद्ध व्यक्तिसँग तुलना गर्छ । गरिब त मनभित्रको दरिद्रताले बनाउँछ । थोरै मानिसले मात्र पुर्खाको सम्पत्तिमा गुजारा चलाउँछन् ।गरिबलाई समाज वा मान्छेले समेत हेपेको देखेको र भोगेका छौ तर त्यो भन्दा बढि भगवानले नै गरिबलाई हेपिरहेको हुन्छ।
एउटा त्यस्तै घटना तुलसीमा देखा परेको छ । आमा लो पेसरका कारण मृ त्यु , बाबाले आखा देख्नु हुन्न घरमा खाना खाने अन्न छैन्। बाबाले आँखा देख्नु हुन्न आमा मरी जानू भो।आमाको किरिया बसेको छु घरमा खाने चामल छैन । यस्तो हा रगु हार गर्नेमा ९ वर्षिय नाबालक हुन सुमन विक । उनको तुलसिपुर ३ राम्री भन्ने ठाउमा खरले छाएको झुपडी छ । सुमन विकका आमाको माघ २१ गते लो प्रेसरका कारण मृत्यु भएको थियो ।
बाउ जोख बहादुर विकले आँखा देख्दैनन। सुमनले भनेका छन् रे जसले सहयोग गर्न चाहनु हुन्छ त्यो हिसाब लेखेर राख्नुस म ठूलो भए पछी कमाएर फिर्ता गर्छु । अहिले उनलाई सबै भन्दा ठूलो चिन्ता आमाको कि’रिया बाट उत्रीने खर्च पनि छैन कसरी उम्कने होला ?
Last Updated on: February 7th, 2021 at 10:44 am